ubhala njani iindaba ezimnandi zomsebenzisi
Eyona Agile Uwabhala njani amaBali oMsebenzisi we-Agile elungileyo
Elinye lamanyathelo okuqala ekuhambiseni imveliso esemgangathweni, kukubhala amabali alungileyo omsebenzisi. Kule posi, sichaza indlela yokubhala amabali alungileyo omsebenzisi kwaye kufuneka kubandakanywe ntoni.
Ibali lomsebenzisi yindawo yokubamba ukusebenza kwemveliso kwaye njengoko igama lisitsho, amabali abasebenzisi achaza indlela umthengi okanye umsebenzisi aya kuyisebenzisa ngayo imveliso.
Ibali lomsebenzisi limele isiqwenga somsebenzi esinexabiso kwishishini elinokuhanjiswa liqela kwisprint. Umahluko phakathi kwebali lomsebenzisi kunye noxwebhu oluyimfuneko ngokwesiko linqanaba leenkcukacha.
Amaxwebhu ezidingo athanda ukuba nesicatshulwa esininzi kwaye aneenkcukacha kakhulu, ngelixa amabali omsebenzisi ikakhulu esekwe kwincoko.
Singahlehlisa isakhiwo sebali lomsebenzisi njenge:
Inkcazo emfutshane yesidingo
Iincoko ezenzeka ngexesha lokuzilungisa ezisemva kunye nokucwangcisela ukukhawulezisa ukuqinisa iinkcukacha
Uvavanyo lokwamkelwa oluqinisekisa ukugcwaliseka ngokwanelisayo kwebali
Inqaku elibalulekileyo ekufuneka ulikhumbule xa ubhala amabali abasebenzisi kukuba zibhaliwe ngokwembono yomsebenzisi oya kuthi ekugqibeleni asebenzise imveliso, kungoko kubalulekile ukuba sichaze ngokucacileyo ukuba ngubani umsebenzisi xa ebhala amabali omsebenzisi.
Uwabhala njani amabali alungileyo omsebenzisi
Njengomgaqo wesithupha, ibali elilungileyo lomsebenzisi kufuneka lihambelane nesifinyezo se-INVEST:
Mna Amabali axhomekeke kumsebenzisi akufuneki axhomekeke komnye ukuze aphuhliswe nangaluphi na ucwangco.
U-N enokuthethwa -Thintela iinkcukacha ezininzi; zigcine ziguquguqukayo ukuze iqela lihlengahlengise ukuba lingakanani ibali eliza kuliphumeza.
V ezinokubakho-ibali kufuneka libonelele ngexabiso elithile kubasebenzisi balo.
NGU liyakhuthazeka - iqela kufuneka likwazi ukuqikelela ibali.
S Ivenkile - amabali abasebenzisi kufuneka abancinci ngokwaneleyo ukuba banele kwi-sprint; amabali amakhulu kunzima ukuqikelela nokucwangcisa.
T ukuzinza - qinisekisa ukuba into ephuhliswayo ingaqinisekiswa kwaye ivavanywe ngokwaneleyo.
Yeyiphi ifomathi esetyenziselwa ukubhala amabali omsebenzisi?
Amabali abasebenzisi ngokubanzi banefomathi elandelayo:
_ Njengo, ndifuna ukwenza njalo ._
Umzekelo: Njenge umthengi ye-abc.com, ndifuna i Ngema ukusebenza ukuze ndikwazi fikelela kwiinkcukacha zeakhawunti yam kwi-intanethi .
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, nikela ingqalelo ngakumbi kulowo usebenzisa le mveliso kwaye uphephe indima yesiqhelo 'yoMsebenzisi'. Ukuba awubazi ukuba ngubani abasebenzisi kunye nabathengi kwaye kutheni befuna ukusebenzisa imveliso, kuya kufuneka hayi bhala nawaphi na amabali omsebenzisi.
Inxalenye yokuqala yebali lomsebenzisi yiNgxelo. Izivakalisi ezi-2-3 ezisetyenziselwa ukuchaza injongo yebali. Sisishwankathelo senjongo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwibali lomsebenzisi ziincoko ezimele ukwenzeka ngokuqhubekayo phakathi kweqela lophuhliso, umthengi, uMnini weMveliso kunye nabanye abathathi-nxaxheba ukuqinisa iinkcukacha zebali lomsebenzisi.
Inkqubo yokwamkelwa ibonisa iimeko zokwoneliseka ezibhalwe njengemeko, zihlala kwifomathi yeGherkin (Inikiwe, Nini, emva koko). Inkqubo yokwamkelwa ikwabonelela ngeNkcazo yoKwenziwa kwebali.
Ngubani omele abhale amabali omsebenzisi?
Kwiimeko ezininzi, amabali abasebenzisi abhalwa ngu Umnini weMveliso okanye uMhlalutyi wezoShishino kunye nokubeka phambili kwimveliso engemva. Nangona kunjalo, oko akutsho ukuba luxanduva loMnini weMveliso kuphela ukubhala amabali omsebenzisi. Ngapha koko, naliphi na ilungu leqela linokubhala amabali omsebenzisi, kodwa luxanduva loMnini weMveliso ukuqinisekisa ukuba semva kwamabali omsebenzisi akhona kwaye abekwa phambili.
Yintoni ebalulekileyo, kukuba amabali omsebenzisi Unga uphathwe njengamaxwebhu eemfuno aya kuthi xa ebhaliwe anikezelwe kwiqela lophuhliso ukuze liwasebenzise.
Amabali abasebenzisi kufuneka abonwe njengeendlela zokukhuthaza incoko phakathi koMnini weMveliso kunye neqela lophuhliso, kwaye ke kufuneka zibhalwe ngokusebenzisana ngexesha leseshoni yokulungisa imveliso.
Uncedo lokubandakanya iqela lophuhliso ekubhaleni amabali abasebenzisi kukuba ukuba kukho naziphi na iingxaki zobugcisa, banokuqaqanjiswa kwangaphambili. Abavavanyi banokongeza ngakumbi ixabiso ekwakheni iikhrayitheriya zokwamkelwa ezifanelekileyo kunye nesicwangciso kwangaphambili kwinto ekufuneka ivavanywe kwaye njani.
Amele ukuba abeNenkcukacha kangakanani amabali omsebenzisi?
Amabali abasebenzisi ajolise kwixabiso labathengi.
Umahluko osisiseko phakathi kwamabali abasebenzisi kunye nezinye iindlela zeemfuno ezichaziweyo linqanaba leenkcukacha. Ibali lomsebenzisi sisikweko somsebenzi owenziwayo, hayi inkcazo epheleleyo yomsebenzi. Owona msebenzi wenziweyo upheliswa kukudibana ujikeleze ibali lomsebenzisi njengoko inkqubo yophuhliso iqhubeka.
Ukuba inkcazo iba nde kakhulu (ngaphezulu kokuya kufaneleka kwikhadi lesalathiso), kuya kufuneka uphinde utyelele ibali lomsebenzisi. Kusenokwenzeka ukuba uzama ukufaka iinkcukacha ezininzi.
Khumbula ukuba injongo yebali lomsebenzisi kukukhuthaza ukusebenzisana. Ayenzelwanga ukuba ibhale phantsi yonke imiba yomsebenzi, njengoko kuhlala kunjalo kwiingxelo zeemfuno zesiko.
Ngaphaya koko, ulwazi oluninzi kwinkcazo lungakhokelela kulwazi olungekhoyo kwiindlela zokwamkelwa.
Ngaphambi kokuvuma ukusebenza kwibali, iqela kufuneka liqonde iikhrayitheriya zokwamkelwa. Oku kubalulekile ngokwazi ukuba yintoni ekufuneka yenziwe ukuze wanelise ibali lomsebenzisi. Iikhrayitheriya zokwamkelwa kufuneka zichazwe ngokwaneleyo ukuba zichaze ukuba ibali lomsebenzisi liyaneliseka, kodwa kungabi ncinci malunga nokuphelisa ukusebenzisana.
Iimpazamo eziqhelekileyo xa ubhala amabali omsebenzisi
Iinkcukacha ezisemthethweni okanye ezininzi kakhulu. Abanini bemveliso abaneenjongo ezintle bahlala bezama ukubhala amabali abasebenzisi aneenkcukacha ezininzi. Ukuba iqela libona ibali kucwangciso lwe-iteration olujongeka njengexwebhu leemfuno ze-IEEE, bahlala becinga ukuba zonke iinkcukacha zikhona kwaye bayitsiba incoko eneenkcukacha.
Ukubhala amabali abasebenzisi kwimisebenzi yobuGcisa. Uninzi lwamandla e-Agile luvela ekunyuseni ukusebenza kwesoftware ekupheleni kweteration nganye. Ukuba amabali akho ngokwenene ayimisebenzi yobuchwephesha, uhlala ungagqibi nesoftware esebenzayo nganye nganye, kwaye uphulukane nobhetyebhetye ekubekeni phambili.
Ukutsiba incoko. Amabali ayicacanga ngabom ngaphambi kokucwangciswa kokulungiswa. Ukuba utsiba incoko yokwamkelwa, ubeka emngciphekweni wokuhamba ngendlela engalunganga, iimeko ezingekhoyo kumda okanye ukujonga iimfuno zabathengi.
Ngaba unazo naziphi na iingcebiso ezinokongezwa kulwazi olungentla ngokubhala amabali alungileyo omsebenzisi? Zive ukhululekile ukubafaka kwizimvo.
Eyona nto ithengwayo nge-s7
I-AT & T ikhupha uhlaziyo lweGPS S7 olongeza ukhuseleko ngoJuni, ukulungiswa kweKnox kunye neMiyalezo
Ubungakanani bebhetri ye-4 ubungakanani bebhetri kunye nokutshaja kuye kwavuza kwi-intanethi
Ungasithumela njani isiQinisekiso seNgcaciso yeNhloko kwi-REST-guaranteed
Iifowuni ezingcono zeMotorola ngo-2021